Kutheni us Mingwang？ -Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co, Ltd.
Kwiimarike zaphesheya, uMingwang useke uthungelwano lwenkonzo yokuthengisa evuthiweyo kumazwe angaphezu kwe-100 nakwimimandla kwihlabathi liphela.
Umthengisi okumgangatho ophezulu wezinto zokunkcenkceshela eChina
• Unxibelelwano lobuchule ngama-24/7.
Siye phambili, iqela lophando lwezenzululwazi kunye nabasebenzi zobugcisa.
Ukuhanjiswa okukhawulezayo, ixesha lokuhambisa elizinzileyo.
Emva kwenkonzo yokuthengisa ikwabonelelwa ukuqinisekisa ukuba ufumana amava amnandi okuthenga nathi.
1.Zeziphi iinkonzo ezibonelelwa nguMingwang?
UMingwang ubonelela ngemigca yokuvelisa ngeenxa zonke, iflethi, udonga olucekeceke kunye nodonga olungqongqo lombhobho wokunkcenkceshela kunye netape yokunkcenkceshela yokunkcenkceshela, imibhobho ye-PE kunye nePVC. Siphinde sithengise izijikelezi zokunkcenkceshela ezijikelezileyo nezicwangcisiweyo kwaye sinike uluhlu lweenkonzo ukusukela ekucwangcisweni kweprojekthi ukuya kuthengwa kweemveliso ezincinci zokunkcenkceshela; UMingwang unakekela ukufakwa kunye noqeqesho lwabasebenzi ngenkxaso eqhubekayo kunye netekhnoloji yakutshanje ukugcina unokhuphiswano kwiimarike zalapha ekhaya nakwihlabathi. Unokuba ngumenzi ozimeleyo ngokupheleleyo wombhobho wokunkcenkceshela, ityiphu yokunkcenkceshela, umbhobho we-PE kunye nombhobho wePVC neMingwang
UMingwang uneminyaka engaphezu kwama-35 yamava okuvelisa kunkcenkceshelo lokunkcenkceshela kunye ne-PE, umbhobho we-PVC extrusion. Sifakele izixhobo zeenkampani ezaziwayo ngaphezulu kwe-100 kwaye sincedisa abathengi ekumiseni iifektri.
Sinikezela ngomgangatho ophezulu, isantya esiphezulu, oomatshini abarhabaxa kugxilwe ekulula kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo okulungele abasebenzi abancinci nabalula. Oomatshini bethu balondolozo oluphantsi kwaye baye bavavanywa ebaleni ukumelana neemeko zeshishini. Xa uthenga eMingwang awufumani nje oomatshini abasemgangathweni, kodwa inkxaso eqhubekayo yobuchwephesha kwiqela lethu elizinikeleyo ekuncedeni uphumelele.